I-Machining centre ne-CNC: izici ezihlukile, injongo, izinzuzo ngaphezu kwezilungiselelo ezilula
I-Machining centre ne-CNC ibhekisela ekufakweni okuzenzakalelayo kwe-axeis. Ineziteshi eziningi zokulawula ezizimele. Inkumbulo igcina imininingwane mayelana nesigaba ngasinye sokucubungula ngomsebenzi, isikhundla sesekelo kanye nethuluzi lokusika. Iphaneli yokulawula ifakwe PC emele-yedwa, evumela ukuthi uphethwe ngokugcwele iphutha. Izinhlelo ezikhethekile zenza kube lula ukulayisha inqubo yamakhodi izingxenye ezintsha.
Yini uhlelo lokuphatha olubandakanya?
I-CNC yokufakisa isikhungo inezindawo eziningana zokusebenza:
Indawo yokusebenza, lapho ukuphinda kusetshenziswe khona ngokushesha.
Gcina amathuluzi okugcina ngesistimu yokulayisha ngokuzenzekelayo.
I-Turntable yokusika izisebenzi zomzimba obude.
Izindlela zokulayisha-ukulayishwa kwezikhala, imikhiqizo.
Amandla wezobuchwepheshe zezitshalo avumela ukulungiswa okusheshayo ngosayizi ohlukile, izingxenye ezibonakalayo. Izentuthuko zakamuva zitholakalayo ekusetshenzisweni kwe-5D. Izindlela zokusika zikhethwa ngokushintsha ijubane lokujikeleza kwe-unit spindle kanye nokondla izikhala ngezinsimbi zokusika.
I-CNC yokufakisa isikhungo kuyanconywa ukusebenzisa ezimbonini lapho kudingeka khona ushintsho olujwayelekile uhlobo lobuchwepheshe. Ukusika insimbi, kwakhiwe izakhiwo eziningana ezifanayo. Ngakho-ke, ukukhiqizwa kwamabhuloki ezinhloko zezinjini zezimoto, ukucubungula emipayipi yezinhlamvu ezihlukahlukene kuyenziwa. Futhi, imigomo efanayo iyaqhutshwa lapho kukhishwa izinkuni namabhandeki epulasitiki.
Isikhungo se-CNC sokusungula sisekelwe kuhlaka oluphikisana nezidakamizwa nemithwalo ephezulu. Izingxenye ezihambayo zinamathele esisekelweni esinzima. Lezi zindlela ezilandelayo zisetshenziselwa ukuphoqa ngomsebenzi:
Gwema ngokubamba. Ijikeleza ngomsebenzi wokusebenza, noma ithuluzi lokusika linamathele kuyo.
Ama-clamps anobuchopho noma omshini etafuleni. Yile ndlela ama-billets amancane afakwe ngayo: amashidi e-plywood, epulasitiki.
I-spindle yamathuluzi yenzelwe izinhloso ezithile ngengxenye ehambayo lapho ama-incisors enza izinyathelo ezithintekayo ngokuqondene nombuso okufanele uphathwe.
Isikhungo sokufakelwa kwe-Milling ne-CNC sikhethwe ngezinhloso zokukhiqiza. Ubukhulu obuningi bezingxenye buyacatshangelwa, okuthinta ubude be-screw-spindle yezinkomba zokuxhumanisa. Abakhiqizi bafaka intuthuko ithuba lokubuyekeza inguqulo yamanje yamishini. Umthengi uhlela ukutshalwa kwezimali esikhathini esizayo ukuthenga ukufakwa okusha noma ukuthuthukisa inguqulo esithengiwe kakade.
I-inertia yezikhonkwane ezilawulwayo ipharamitha ebalulekile yokwanda komkhiqizo. Lapho ulungisa izidingo zejubane lezingxenye zokukhiqiza, i-parameter ebalulekile isethwe-ukuthembeka kwamabandla ajikelezayo. Ukufakelwa kwe-pulsation okuzenzakalelayo yeziqondiso kuyisici esibalulekile ekuklanyeni komshini. Izinkinga zalezi zimingcele ziholela ekunciphiseni ngokunemba ebukhulu bezingxenyeni, izintambo nemifantu.
Yini ukufakwa okuzenzakalelayo okukwazi ukuyenza?
Izikhungo zokuguqula i-CNC zisetshenziselwa ukucubungula izingxenye ezijikelezayo. Izinhlobo zokusebenza:
Esikhathini esiphendukayo, ithuluzi lihamba ngesistimu yokuxhumanisa, ingxenye iphoqelelwe ku-unit spindle. Izinto zokucubungula zithinta ukuqina komkhawulo wesakhiwo. Izikhungo zokumaketha zenza imininingwane elandelayo:
Imishini eyengeziwe ihlanganisa iyunithi yokupholisa yokupholisa indawo yokusika, ukususa izinhlamvu. Ukunciphisa okukhethekile kunconywa ukuba ukhethe ukukhiqizwa okulodwa kokulinganisa konke.
Isitimela "Severnaya Verf": umlando, ukukhiqizwa
Ukuqhathaniswa kwamanani okukhiqiza okuzimele nokukhiqiza kwekhonkrithi.
Amapayipi e-PVC ahlotshisiwe: incazelo nenhloso
Amathuluzi omshini we-CNC wokusebenza ngezandla: ukubuka konke okuningiliziwe, imininingwane, izinhlobo kanye nokubuyekezwa
I-mixer ekhonini: Thenga ukwakhiwa
Goryunova Machine Gun: imininingwane kanye nezithombe
Ishq ukuqina. Lose Weight ezinsukwini ezingu-14
Ukudla Japanese: izinsuku ezingu-14 - futhi 8 khilogremu kuyinto engekho
Instant tan. Izibuyekezo kanye Izincomo
Izinto mobile ohlelweni lokuqapha. Global Navigation Satellite System (GLONASS). uhlelo GPS-zokuqapha
Kungani ngiba amadevu ngesikhathi intombazane nendlela yokubhekana nazo?
Indlela ewusizo zasolwandle ngesikhathi sokukhulelwa?
Inshallah. Kuyini futhi kufanele nini ukubiza?